निर्बाध स्वतन्त्रताको पक्षमा | रुपान्तरण
निर्बाध स्वतन्त्रताको पक्षमा
२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०७:२८
‘रुपान्तरण’ चमत्कारिक शब्द हो। राज्य र समाज व्यवस्थामा रुपान्तरणका लागि नेपाली जनता सात दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय छन् र पनि त्यो उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन। नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा वीपी कोइरालाले राज्यको रुपान्तरणका लागि कडा कदम चाल्नुभएको थियो। जग्गामाथि जोत्नेको हक स्थापना गर्न वीपीले चाल्नुभएका कदम निर्णायक थिए। तर, रुपान्तरणको त्यो कार्यसूची प्रयोगमा आउन लाग्नासाथ राजा महेन्द्रले सैनिक षड्यन्त्रका माध्यमले वीपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ गरे। वीपी लामो समयसम्म कारागारमा रहनुभयो।
वीपी कोइरालाले अपनाउन खोज्नुभएको समाजवादको विकल्पमा उनले ल्याएको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था तीस वर्ष चल्यो। त्यो परिणामविहीन व्यवस्थाका विरुध्द देशमा भएको पहिलो राष्ट्रिय जन–आन्दोलनले त्यसलाई हटायो। राजा संवैधानिक बने। यो परिवर्तन पनि साँघुरो भयो नेपालीका लागि। यसैबीच शुरु भयो माओवादी विद्रोह। उपसंहारका रुपमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन शुरु भयो। त्यो तानाशाहीका विरुध्द भएको दोस्रो जन–आन्दोलनपछि नेपाल गणतन्त्रमा रुपान्तरित भयो। २४० वर्ष शासन गर्ने शाहवंश नेपालबाट बिदा भयो।
सरकार स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको विपक्षमा उभिएको स्पष्ट भएको छ। सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको भए पनि यो संसदीय सरकार हो। यो सत्यलाई स्वीकार गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ।
यति विशाल परिवर्तनपछि पनि बडो अनौठो समयमा बाँचेका छौं हामी। सामान्य मानिसमा स्वाभाविक व्यग्रता छ। त्यो भन्दा बढी व्यग्रता पढे–लेखेका बौध्दिक वर्गमा छ। राजधानी काठमाडौं र खास गरेर देशका शहर–बजारमा सुनिन्छ, ‘हिजो एउटा राजालाई हटायौं। अहिले थुप्रै नयाँ राजाहरु देखापरेका छन्।’ यस्तो कुरा गर्ने बुध्दिजीवीको ठूलै जमात छ। यिनीहरु हिजो एउटा राजा हटाउन सक्रिय भएका थिएनन्। त्यसैले यिनीहरुले थुप्रै नयाँ राजाको कुरा गर्नु सुहाउँदैन। तर, जनताको तहमा पनि यही कुरा सुनिएको छ। जनताले पनि नयाँ राजाहरुको रजगजका कुरा दोहोर्याउन थालेका छन्। यसलाई इन्कार गर्न मिल्दैन। यसलाई अस्वाभाविक भन्न पनि मिल्दैन।
देश गणतान्त्रिक भएको एक दशक भइसक्यो। त्यसका उपलब्धि के भए त? जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन्। यो अन्योल त छँदैछ।
सत्तामाथिको एकाधिकारका कारण अहिले कुनै पनि दलका प्रभावशाली भनिने नेताहरुको हैसियत ह्वात्तै बढेको छ। दलका नेताहरु जो सत्तामा छन् ती आफूलाई शक्तिको केन्द्र हौं भन्ने सोच्न थालेका छन्। जनतालाई सेवाको ‘डेलिभरी’ मा भन्दा आफ्नै दम्भमा डुबेको छ उनीहरुको व्यक्तित्व। केही नेताहरुको दुराचरणले गणतन्त्र विरोधीहरुलाई मद्दत पुगेको छ। राजाको शासन कति कठोर थियो! सामान्य जनताले त्यसलाई बिर्सिएका छैनन्।
बेथितिको यो मौसममा रुपान्तरण सञ्चालनको यो प्रयास धेरैका लागि अनौठो हुन सक्छ। रुपान्तरण अनौठो उपक्रम होइन, अनलाइन पत्रकारितामा नयाँ अनुभव साबित हुन खोजेको एउटा प्रयास हो।
आजको यो बेथिति अहिलेका शासकले उत्तराधिकारमा पाएका हुन्। उनीहरु त्यसैमा जेलिएका छन्। शक्तिको चरम दुरुपयोगका उदाहरण बनेका यी शासकहरु कुनै पनि विषयमा जनतालाई जानकारी दिन सक्षम छैनन्। अहिलेका विकास कार्यक्रमलाई हेरौं। राष्ट्रिय महत्वका भनिने कुनै पनि योजनाले पूर्णता पाएका छैनन्। अपूर्णता र असफलता नै प्रतीक बनेको छ सबै सरकारको। सरकार त्यो चाहे जुनसुकै नेतृत्वको होस्। सरकार नेताहरुको ‘सेवा केन्द्र’ जस्तो बनेको छ। बिरामी परेका नेताहरुलाई विदेशमा उपचार गर्न खर्चको निकासा दिने अड्डा।
बेथितिको यो मौसममा रुपान्तरण सञ्चालनको यो प्रयास धेरैका लागि अनौठो हुन सक्छ। रुपान्तरण अनौठो उपक्रम होइन, अनलाइन पत्रकारितामा नयाँ अनुभव साबित हुन खोजेको एउटा प्रयास हो। हामी सूचनालाई ठूलो महत्व दिन्छौं। सूचनालाई प्रशोधन गरेर त्यसलाई पत्रकारिताको नयाँ आयामका रुपमा प्रस्तुत गर्नु हाम्रो अभीष्ट रहेको छ। नेपाली राज्य, समाज व्यवस्था र आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन हाम्रो आग्रह हो, माग हो र कार्यसूची हो। यो कार्यसूचीका प्रति हामी दृढ छौं। अहिले देशमा राज्य र समाज व्यवस्थाको रुपान्तरण होइन, सूचनामाथि निषेधको चक्र चलाउने काम भइरहेको छ।
सरकार स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको विपक्षमा उभिएको स्पष्ट भएको छ। यो संसदीय सरकार हो। यसमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विजय पाएको छ। कुरा त्यति मात्रै हो। सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको भए पनि यो संसदीय सरकार हो। यो सत्यलाई स्वीकार गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ सरकारले। छड्के, बाँकटे हानेर देशलाई असत्यको भासमा गाड्ने इच्छा राख्नु हुँदैन। अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको मिडिया विधेयक सरकारले बिनाशर्त फिर्ता लिनुपर्दछ। त्यसपछि मात्र नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्न सकिन्छ।
हामी देशभक्त नेपाली जनताको निर्बाध स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका छौं।
कोरोना विरुद्धको खोप आयो, लगाउने कहिले ?
८ माघ २०७७, बिहीबार १४:५३